Company News Suppliers sy Factory - China News Company Manufacturers
New Connet Website Nalefa
ny mpitantana ny 18-07-30
Fa ny mety sy haingana Browsing ny mpanjifa iraisam-pirenena, Connet nanomboka ny vohikala vaovao www.connet-laser.com Jolay 26, 2018. Mba maka fotoana izany, Connet mamerina manontolo ary reclassifies ny vokatra mba hanatsarana ny vokatra tsipika. Fa ny fifandraisana ara-teknika, Connet manampy ny anjara ...
Connet Laser efa lasa ISO9001-2008 toetra rafitra fitantanana taratasy fanamarinana
Tamin'ny taona Optimization ny raharaham-barotra sy ny fitantanana, Connet Laser Teknolojia izay no lasa soa aman-tsara ny antoko fahatelo taratasy fanamarinana kalitao sy fanaraha-maso iraisam-pirenena mahazo ISO9001-2008 rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana kalitao. 'Maso amin'ny hoavy, fikatsahana toetra; Zava-baovao tsy miankina, Tandremo ny improv ...
Connet nanao fahombiazana miseho eo amin'ny tontolon'ny tamin'ny laser 2015 photonics Shina
Ny 2015 Laser tontolon'ny photonics Shina, ny Azia lehibe indrindra tamin'ny laser, optoelectronics sy photonics fampirantiana natao tamin'ny 17-19, Mar, 2015 tao Shanghai Expo New International Center. Connet nahomby tamin'ny laser nanao fampisehoana tany ity vaovao fampirantiana vokatra. Connet tamin'ny laser indrindra indrindra nampiseho-baovao ...
Nanomboka Connet birao-mifindra amin'ny 8:50 maraina ny 28 Oktobra, 2017. Nanamarika izany fa Connet niditra teo an-marika-toko vaovao. Connet mpiasan'ny rehetra nanatri-maso ny fotoana fahatsiarovana. Ny birao vaovao dia fotoana vitsy lehibe kokoa noho ny teo aloha ny iray Atrikasa anisan'izany ny famokarana, ny R & D Lab, ny madio ...